BLU ကုန်ပစ္စည်းများသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိသည် Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း
ယနေ့ Androidsis ဆာဗာမှတဆင့် ၌တည်ရှိ၏ အလွန်အထူးတည်နေရာ။ ဒီနေ့ငါတို့ scrolled ပြီ ဗလင်စီယာ။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Valencia CF အားကစားကွင်းဖြစ်သော Mestalla ရှိ BLU VIP ခန်း၌ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြမည်။ ပြီးတော့ငါတို့လုပ်မှာပါ အထူးကုမ္ပဏီစပိန်စျေးကွက်တွင်သူ့ဟာသူစတင်ဖွင့်လှစ်ထားသောဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုသီးသန့်သိရှိနားလည်ရန်.
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့အကြောင်းကိုမကြားရသေးပါက၊ BLU ထုတ်ကုန်များ, အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည် ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်လက်တင်အမေရိကရှိအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအများဆုံးဖြစ်သည်။ "ငါတို့ကဲ့သို့ရဲရင့်ခြင်းသူ၏စပိန်တွင်“ ငါတို့ကဲ့သို့ရဲရင့်သည်” ဟူသောသူ၏ဆောင်ပုဒ်သည်။ ဤသည်ငယ်ရွယ်ကုမ္ပဏီတခုက၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ မိုင်ယာမီတွင်အခြေစိုက်သည်။
1 BLU သည်“ ငါတို့ကဲ့သို့ရဲရင့်သောသဘော” အသစ်အသစ်ကိုကတိပြုသည့်ဆောင်ပုဒ်
BLU သည်“ ငါတို့ကဲ့သို့ရဲရင့်သောသဘော” အသစ်အသစ်ကိုကတိပြုသည့်ဆောင်ပုဒ်
အပြာရောင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင်ရောင်းချခဲ့သည့်ပစ္စည်းဆယ်သန်းကျော်သည်။ အခြားစျေးကွက်များတွင်ရရှိသောအောင်မြင်မှုကိုထောက်ခံသည့်ကိန်းဂဏန်းများ။ ၎င်းသည်စပိန်စျေးကွက်တွင်၎င်းတို့ပါဝင်ခြင်းအတွက်သက်သေပြထားသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေဖြင့်သေချာပေါက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ BLU သည်၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုမိုင်ယာမီတွင်ဒီဇိုင်းထုတ်သည် နောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာသူတို့ကိုစုဝေး။
တစ် ဦး ကလက်မှတ် ငါတို့တိုင်းပြည် stomping ဝင်ပါ။ ကလုပ်နေတာ ဘောလုံးမှတဆင့်။ BLU သည်ကြော်ငြာရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် Valencia CF ၏တရားဝင်စပွန်ဆာ။ ထို့အပြင်သူသည်ယခုရာသီနှင့်လာမည့်ရာသီများတွင် "Che" အသင်းကို ၀ တ်ဆင်လိမ့်မည်။ သင်၏နာမကိုစပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအားကစားရုံများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်အလွန်ကောင်းသောစီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမှာသေချာသည်။
ဘာပဲ တတ်နိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့သည် သူတို့အခြားအဆင့်သို့သွားပြီ ထိုအခါတစ်ချိန်ကစျေးကွက်အများအပြားအတွက်ပေါင်းစည်းယခုဖြစ်ပါတယ် ဒီစမတ်ဖုန်းတွေဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲနေတယ်။ ရှုပ်ထွေးသောမရှိဘဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခံရဖို့မလိုဘဲ။ ဒီကုမ္ပဏီကအခုလွှတ်လိုက်ပြီ အားကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖုန်းအသစ်တစ်လိုင်း။ တစ် ဦး အတန်ငယ်ပြိုကျကဏ္ in တစ်ခုနယ်ပယ်ရရှိမှု.
အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်များနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့စွဲလက်မှတ်များရှိသည့်စက်ပစ္စည်းများကြားရတာကိုငြီးငွေ့နေလျှင်။ ဒါကမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံရသည် အပြာရောင်နေဖို့ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်, အလယ်အလတ်တန်းစားပစ္စည်းတွေအတွက်အလွန်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူ, စပိန်စျေးကွက်မှခိုင်မြဲစွာကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ၎င်း၏နဖူးစည်းစာတန်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းဆုံးကိုမစွန့်ဘဲဈေးပေါသောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ငါတို့ BLU ၏လောင်းကစားကိုသိတော့မည် အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ကုန်များအတွက်။ စမတ်ဖုန်းများ အဘယ်သူသည်လက်ရှိတွင်လိုအပ်သမျှကိုပေးကတိပေး အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာ။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ကျနော်တို့ unbox မှသီးသန့်အခွင့်အလမ်းရပါလိမ့်မယ် ဤအဆိပ်ကမ်းအများအပြားကနေ။ ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုထင်သလဲ။
ထို့ကြောင့်မည်သည့်စမတ်ဖုန်းများနှင့် BLU သည်စပိန်ဈေးကွက်ကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်သည်ကိုသိရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ မကြာခင်မှာပဲမင်းတို့ကပစ္စည်းအသစ်တွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပြသပြီးအဲ့ဒီ့တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆန်းစစ်နိုင်မှာပါ။ BLU သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အမှတ်အသားပြုလုပ်နိုင်ပါမည်လား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » BLU ထုတ်ကုန်များသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိသည်
Mmm၊ blu သည်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတွင် android operating system ၏အဆင့်မြှင့်တင်မှုများမရှိခြင်း (သို့) မရှိသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကို Lollipop မတိုင်မီအထိမွမ်းမံနိုင်ခဲ့သည်။
Huawei Mate 10 Pro သည်ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်
Mobile Phone Cooling Apps - သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်သလား။